Mwoyo inofanira kuratidza Jesu
Nyika inoda vaKristu vane mwoyo unopfuta uye girazi inoratidza Jesu Kristu.
Kana kumba ndaiva, ndinoona pachangu mugirazi uye oti, "Ini handina kuona here kare?". ipapo pakanga pasina zvinoshamisa pamberi, munoziva, zadza kurwara sezvo ndakanga. Nhasi ndiro girazi mufananidzo haisi chete, zvino unonzwa kufara kuti muve vaJesu Kristu uye kuti vave vana vake, kunyange zvikanganiso ayo uye zvikanganiso.
Wakamboona pachako mugirazi kwevhiki?
Kugoverana ndiye hunhu hwechiKristu. Uyo anoda anoda kupa nezvaanazvo. Ndakanga kuenda kukubvunza kana wakamboona pachako mugirazi kwevhiki? Zvichida uri kufunga o o saka akwegura ndava Nämen wrinkles zhinji saka ndakaugamuchira nokuda Andy kuti tsamba, kana unogona kuona, o o I kuwana kuwedzera kutarisika ose zuva Mwari anondida!
kufungisisa wedu unofadza zvakarurama? Kweanenge makore 15 apfuura ndakanga kuitazve uye kunwa rakawanda doro uye akava nerbrottad varindi zvina uye vaviri cops vakabvunza makadii? Zvakanaka zvakanga zvisina kudaro zvakanaka Andy vakanga, maererano vanachiremba vakashanda rinenge 4 paminiti zviuru mumuviri, kuti ndiye, mukana dzinouraya doro chepfu, zvose izvi Christmas Day!
Ndakanga ndadya Mugove rödbetsallad naHamu pana Morgan, shamwari yangu, uyo aiva vakadhakwa. Takanga taenda kunzvimbo kuungana uye ikoko ini blacked panze uye asingauyi kurangarira zvandakanga ndaita, kamwe kamwe ndine varindi mana uye vakuru vaviri mapurisa uyo mutsimba neni pasi pasi.
With doro zvikuru mumuviri saka vakandiendesa kuzadza sero yandinofamba zvinosuruvarisa spyde pasi beetroot Salad. Ndainyara saka vakati aizotuma ini kumba, nerspydd uye bhandi pamutsipa wangu, uye pasina masokisi, I kukamba yemapurisa. Yakanga madhigirii dzinenge 20.
Kana kumba ndaiva, ndinoona pachangu mugirazi uye oti, "Ini handina kuona here kare?". ipapo pakanga pasina zvinoshamisa pamberi, munoziva, zadza kurwara sezvo ndakanga.
Nhasi ndiro girazi mufananidzo haisi chete, zvino unonzwa kufara kuti muve vaJesu Kristu uye kuti vave vana vake, kunyange zvikanganiso ayo uye zvikanganiso.
Kupisa moyo kuti ndiye girazi mufananidzo waJesu
Tinoda zvakawanda rwaMwari kuvanhu tionane! Funga kuti mashoko zvikuru tine, asi tinofanira kuda muvakidzani wedu? World rinodederesa kure kufunganya uye zvichava kunyange kupfuura zvatiri kuona iye zvino. Nyika inoda vaKristu vane mwoyo unopfuta uye girazi inoratidza Jesu Kristu.
Zvino ndinogona kuona pachangu mugirazi
The girazi mufananidzo, ndaifanira kutarisirawo inonzi ukaguta rwakapoteredza yangu Morgan haana inofadza, ndakanzwa saka zvakaipa pashure. Zvino ndinogona kuona pachangu mugirazi uye ikoko Ndinoona akanaka ravakadzikunurwa akaponesa mutana makore 51. Hongu, Handina kufanana ose vamwe, chinofanira kuzvimba pachena zvose tsamba yangu? Asi chero zviri iwe neni akada naJesu Kristu.
Vecka 24, fredag 18 juni 2021 kl. 01:22